संसद् विघटन नेपालको राजनीतिक माहोल निक्कै तातिएको छ। पुस ५ गते मन्त्री परिषद्ले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सिफारिस गर्यो। सोही दिन राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट संसद भंग भएको घोषणा भयो।
त्यसयता लगातार मुलुकको राजनीतिमा तातिएको छ। यत्ति मात्रै त राजनीतिमा स्वाभाविक पनि हो। समय समयमा राजनीतिक माहोल ताती नै रहन्छ। तर यस पटक राजनीतिक वृत्तमा छुट्टै माहोल बन्यो। किनभने सत्तारुढ पार्टीको विभाजन प्रमुख कारण बन्यो।
नेकपा औपचारिकरुपमा त विभाजन भएको छैन, तर यो पार्टी २ धारमा विभाजन भएपछि भएका आमसभा, विरोध प्रदर्शन तथा भाषण दैनिक चार–पाँच ठाउँमा हुन्छन्। प्रधानमन्त्री समेत रहेको केपी शर्मा ओलीले एउटा धारको नेतृत्व गरेका छन् भने अर्को पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले।
तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी पार्टीबीच एकतापछि बनेको नेकपा अहिले औपचारिक फुट्न मात्र बाँकी छ। तर यो पार्टी विभाजन तत्कालीन एमाले र माओवादी गुट भएर फुटेको छैन। एमालेको नेतृत्व सम्हालिसकेका नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल प्रचण्डपक्षमा छन्। माओवादीका सशक्त नेता ओलीको कित्तामा उभिएका छन्।
पार्टीको गति विभाजनमा गइसकेपछि नेताहरु अहिले एक पक्षले अर्कोपक्षको अलोचना गर्ने, खुइल्याउनमै केन्द्रित छन्। राजनीतिमा एकले अर्को पक्षको आलोचना गर्नु नाैलो त होइन। तर झण्डै एक महिनायता दुवै नेकपा यसरी खुलेर आलोचना अनि बदख्वाइँमा उत्रिएका छन् कि अब दुई पक्षले दोषारोपण गर्न बाँकी केही छैन।
तर नौले यतिबेला भयो, जब प्रचण्ड ओलीको भाषण नाटक–नौटंकीमा पुग्यो। अहिले सामाजिक सञ्जालमा यो सर्वाधिक हिट छ। ‘नाटक’ र ‘नाैटंकी’ शब्द नै भाइरल भाइरल नै भइसक्यो।
प्रचण्डले एउटा विरोधसभामा सम्बोधन गर्दै ‘ओलीले जिन्युजलाई दिएको अन्तर्वार्ताका प्रसंगमा ओलीले भनेका र गरेका काम नाटकै भएको टिप्पणी गरेका थिए। उनले भनेका थिए– अस्ति भर्खरै तपाईंहरुले हेर्नुभयो नि? जि न्युजको ईन्टरभ्यू। उहाँले बोलाको, त्यो नाटकै हो, ना….टकै हो, नाट……कै हो। नाटकै हो।’ प्रचण्डको यस ‘नाटकै’ भनाइलाई ओलीले उस्तै शैलीमा ‘नौटंकी’ भनी फर्काएका थिए।
ओलीले प्रचण्डको नाम त लिएनन्। तर उनले भने –’अन्तरवार्तालाई लिएर आलोचना गर्ने ठाउँ नपाएपछि एउटा नेताले भाषण गरे, यो अन्तरवार्ता नौटंकी हो, नौ…..टंकी हो। नौटं…..की नै हो।’
ओली उसै पनि कसैले आफूप्रति गरेका टिप्पणीको जवाफ फर्काउन माहिर छन्। प्रचण्डले यत्ति भनेपछि ओलीलाई जवाफ फर्काउन झनै सजिलो भयो। तर उनीहरुको नाटक नौटंकी यतिमा मात्र सीमित भएन। एक पक्षले देशका कुनै पनि कुनामा गरेको भाषण उति नै खेर वा भोलिपल्टसम्म भए पनि प्रतित्युर आइहाल्छ। ओलीले त प्रचण्ड मात्र हैन, माधव नेपाल, भीम रावल, योगेश भट्टराई, झलनाथ खनाल सबैलाई हरेक आरोप र लाञ्छनाको उत्तरको दिँदै आइहरेका छन्। ​
फेसबुकमा स्टाटस, कमेन्ट हरेक सेक्टरमा अहिले प्रचण्ड र ओलीको ‘नाटक, नौटंकी’ चर्चामा छ। भिडियो त के यो शब्दमा रहेर टिकटकमा मात्रै करिब १ लाखको हाराहारीमा भिडियो बनेका छन्।
कतिले हेरे भन्ने हिसाब राख्न सायदै असम्भव ‘नाटक नौटंकी’ यतिमै सीमित भएन। ख्यातिप्राप्त कलाकारले पनि यहि शब्द भाइरल बनाइदिए। अहिले त यो शब्द राखेर गीत नै बनिसकेको छ। भिडियो पनि भ्याइसके।
तीमध्ये गायक तथा सर्जक नरेश खातीले पनि ‘नाटक र नाैटंकी’ शब्द राखेर आफ्नै संगीतमा गायक मेक्सम खाती, गायिका समीक्षा अधिकारीले आवाज भराए। यो गीतको भिडियोमा अहिले लोकप्रिय बन्दै गएकी मोडल गरिमा शर्मा र मेक्समले अभिनय गरे।
त्यस्तै लोकप्रिय गायक टंक तिमिल्सैनाले पनि ‘मुटु काठकै हो, तेरो नाटकै’ हो बोलको गीत सार्वजनिक गरे। गीतमा गायक हेमराज थापा बाबुराजा, तथा र्यापर सुवास कार्की उर्फ कार्की जी पनि छन्।
यी गीतहरु सार्वजनक भएको छोटो समयमै लाखौं पटक हेरिएका छन्। ट्रोलको कुरा गरी साध्य छैन। यतिविधि मजाक नेपाली राजनीतिमा सायद इतिहासमा होला, नहोला। जनताले हिसाब राख्नेछन्।
नेताहरुले बोल्दै गर्दा भाइरल भएका शब्दलाई लिएर गीत आउनु यो पनि कुन नयाँ नौलो नाटक, नौटंकी नै हो ? यो पनि नाटक नौटंकी नै हो।